Mayelana NATHI | Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
Inkampani ye-1.Daohong isebenzisa isu lomhlaba wonke futhi ithuthukisa ibhizinisi lethu liya e-United States, Europe, Japan, Canada, Australia nakwamanye amazwe. Le nkampani ibiphethwe ngokuqhubekayo futhi yathuthukiswa ngokuya ngefilosofi yenkampani ethi "Ikhwalithi iyimpilo" ngaso sonke isikhathi kusukela ngo-2009.
2.Ku-2014 besesithole eyethu isitifiketi sensimbi engagqwali swivel izingxenye patent. Futhi fo unded Hui heng ifektri main ukukhiqiza patent izingxenye zethu.
3. Besikhiqize okungaphezulu kuka 50000 izinhlobo ezahlukahlukene zezingxenye zamakhasimende ethu. (2 amafektri + abasebenzi abangu-100 + ama-50000 amadizayini + i-oda elincane + ukuthunyelwa okusheshayo) .90% yemishini yethu yokukhiqiza ingeniswa isuka eJapan naseJalimane ukuze inikeze amakhasimende ethu imikhiqizo yokuncintisana engcono kakhulu.
Ububanzi be-4.Umkhiqizo uhlanganisa izingxenye zokuncibilikisa ze-cnc ngokwezifiso, izingxenye ze-shaft, igiya kanye nezingxenye ze-shaft shaft, izingxenye zokunyathela, sigxila kuzinqubo ezilimazayo zokusika, ukugaya, ukukaka, nokupholisha izingxenye ezincane zensimbi ngokunemba, futhi sine-R & D yethu brand TV Mounts, ideski elimi, izingxenye zokushweza;
Babeqinisekiswe ngezitifiketi ezifana neROHS; SGS;
Ngaphezulu kuka Iminyaka eyi-10 ukuthekelisa isipiliyoni, sinomugqa wokuqala wokukhiqiza onendawo yokuhlola yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, njenge-line line, ulayini wokuhlola.
Imikhiqizo yensimbi esetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene, inkampani ikunaka kakhulu ekusungulweni kwesayensi nobuchwepheshe, insizakalo nokuphathwa.
Imikhiqizo yethu ithunyelwe ngaphezu kwe- 30 amazwe nezifunda emhlabeni jikelele.
Ingabe nomkhiqizi professional kanye isithekelisi kwemikhiqizo kagesi e China ezikhethekile R & D, ukukhiqiza kanye yokuthengisa.
Silwela ukuhlangabezana nomgomo wokuthuthuka FULLWILL ezweni elihola phambili lokunemba kwensimbi elihlanganisiwe futhi ngibheke phambili ekusunguleni ubudlelwane bebhizinisi lesikhathi eside nawe ngenzuzo efanayo.
Sinabanjiniyela be-Quotation aba-3 futhi banolwazi olungaphezulu kweminyaka engu-6 lokusebenza kumakhasimende angaphandle. Bangakhetha inqubo efanelekayo yamakhasimende ethu. lapho ukuthengisa kuthola imidwebo evela kumakhasimende. Unjiniyela we-Quotation uzofunda imidwebo futhi uma sinezingcaphuno mayelana nemidwebo singanikeza amakhasimende ethu impendulo ngokushesha. Ikhasimende lethu lingathola ikhotheshini yethu kungakapheli izinsuku ezimbili.
Uchwepheshe wethu onguChwepheshe unolwazi olungaphezulu kweminyaka emihlanu, singenza imidwebo esemthethweni ye-2D nemidwebo ye-3D ngokuya ngamasampula ethu nemibono yamakhasimende.
Umbono wakho + DAOHONG = IMIKHIQIZO
Umhloli wethu wekhwalithi unolwazi olungaphezulu kweminyaka engu-5 lokusebenza, Unesibopho sokulawula ikhwalithi yokukhiqiza ngobuningi futhi aqinisekise nokuqina kokukhiqizwa.
Umphathi Wokugcina Wekhwalithi
Umphathi Wethu Wokugcina wekhwalithi unolwazi olungaphezulu kweminyaka engu-6 lokusebenza. Umsebenzi wakhe omkhulu ukuhlola kabili umsebenzi womhloli wekhwalithi. Lapho izimpahla seziqedile uzokwenza imikhiqizo spot check. Ukulethwa kwemikhiqizo emihle kumakhasimende ethu.
CNC Precision LATHE NGOKUZENZAKALELAYO
UKUBHOLA KANYE NOKUSHAYA NGOKUPHEPHA
Izingxenye ze-CNC LARE
IZINTO EZINTATHU ZOKUXHUMANISA UKUKALISA I-INSTRUMENT (CMM)
I-HARDNESS TESTER (I-SCLEROMETER)
UMSHINI WOKUHLOLA UTSWALA
Umshini we-CNC: Ukunemba ± 0.01mm
I-CNC Precision Automatic Lathe: Ukunemba ± 0.003mm
Lathe: Ukunemba ± 0.01mm
Inqubo yethu Yesevisi
Sikhiphe izinhlobo ezingaphezu kuka-50000 ezahlukahlukene zezingxenye zomshini ze-CNC.